Dacwdaha ka dhanka ah Henry Rotich ayaa ka dhashay baaritaan ay booliska ku sameeyeen si qaldan u isticmaalka lacag loogu talo-galay mashruuc biyo-xireen ah oo ay maamulaysay shirkadda Talyaaniga ee CMC Di Ravenna.
Rotich ayaa beeniyey inuu wax qalad ah sameeyey kadib xayeysiin weyn oo uu bishii March ku daabacay wargeys. Shrikadda CMC Di Ravenna ayaa sidoo kale beenisay inay wax qalad ah sameysay.
Rotich iyo dadka la eedeysan ayaa wajahaya sideed dacwad oo ay ka mid yihiin inay maleegeen inay wax qimaayeeyaan iyo si-xun u isticmaalka maaliyadda, sida uu sheegay Nooradin Haji oo ah agaasimaha dacwad-oogayaasha dowladda.
Nooradin ayaa sheegay in wasiirka iyo saraakiisha kale ee eedeysan la horgeyn doono maxkamad.
Dacwad-oogayaasha Kenya ayaa ka codsaday mas’uuliyiinta Britain iyo Talyaaniga inay gacan ka siiyaan kiiskan, waxaana taas ka dhallan kara dacwado hor leh.
Wasiirka ayaa waxaa dacwadaha lagula soo oogay 27 sarkaal oo kale, oo uu ku jiro Paolo Porcelli oo ah agaasimaha CMC di Ravenna, una dhashay dalka Talyaaniga, iyo wasiirka ku xigeenka maaliyadda Kenya, Kamau Thugge.
Labada biyo-xireen ayaa waxaa loo qoondeeyey miisaaniyad ah 46 bilyan oo Kenya shilling una dhiganta 446 milyan oo dollar, sida uu sheegay Nooradin, hase yeeshee waxaa wasiirka iyo kuwa la eedeysan ay adeegsadeen lacag 17 bilyan oo Kenya shilling oo dheeraad ah, oo aan loo baahneyn.